जेठ १० गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बियो – sunpani.com
जेठ १० गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बियो
नेपालगञ्ज – बाँकेमा जारी निषेधाज्ञालाई एक हप्ता थपिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले निषेधाज्ञालाई जेठ १० गते राती १२ बजेसम्म निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । उनले कोभिड–१९ को संक्रमण दरमा कमी नआई परिस्थिति असहज बन्दै गइरहेको स्थितिमा संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।
बाँकेमा बैशाख १३ गते रातीदेखि २० गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । त्यसलाई बढाएर २७ गते, हुँदै जेठ ३ गतेसम्म पु¥याइएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले चौथो पटक सूचना जारी गरेर निषेधाज्ञालाई जेठ १० गते रातीसम्म पु¥याएका हुन् । त्यसअघि बैशाख ९ गते रातीदेखि नेपालगञ्ज एरियामा मात्रै निषेधाज्ञा लगाइएको थियो ।
बाँकेमा अझै कोरोना महमारी नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । दैनिक मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी देखिदैन । यद्यपि, केही दिनको तथ्यांकले बाँकेको भन्दा बाहिरी जिल्लाबाट उपचार यहाँ आएको संख्या बढी देखिन्छ ।
यसैबीच, विहान एक घण्टाको बीचमा तीन जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का ४८ वर्षीया महिलाको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मृत्यु भएको छ । बैशाख २३ गते पीसीआर गरिएका उनलाई त्यही दिन भर्ना गरिएको थियो । उनको विहान ९.१५ बजे मृत्यु भएको छ ।
खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ३ का ६७ वर्षीया महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । बैशाख २१ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २७ गते भर्ना गरिएको थियो । उनको विहान ९.४५ बजे मृत्यु भएको छ । कैलाली कैलारी गाउँपालिका वडा नं. ५ का ३८ वर्षीय पुरुषको भेरीमा मृत्यु भएको छ । बैशाख २३ गते सेती अस्पतालमा पीसीआर गरिएका उनलाई २७ गते भेरीमा भर्ना गरिएको थियो । उनको विहान १०.१५ बजे मृत्यु भएको छ ।
योसँगै बाँकेमा कोरोनाबाट एक सय ४० र बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ उपचार गराउन आउदा एक सय ९१ जनाको मृत्यु भएको छ ।